Fanafihana mitam-piadiana teny Behoririka Tsy mitombina ilay vehivavy roa voalaza fa nanafika vola
Tsy mbola nisy naharay fitarainana ireo manampahefana eny ifotony mikasika ilay vaovao tamin'ny tambajotran-tserasera voalaza fa fanafihana fitoeram-bola ana tranombarotra teny Behoririka.
Ny polisy ao amin'ny kaomisarian'ny boriborintany fahatelo dia nanambara fa tsy naharay fitoriana izy ireo hatramin'ny nanoratana ny vaovao. Nahitsy mihitsy aza ny filazan'ny tompon’andraikitry ny serasera ao amin'ny kaomisaria Antaninandro fa vaovao diso io naely io. Ankoatra ny manampahefana eo amin'ny mpitandro filaminana dia nanamafy ireo tompon’andraikitra sivily eny ifotony, ny lehiben'ny secteurs na vakimparitra sy ireo sefo fokontany fa tsy nisy fitoriana nandalo. Midika izany fa tsy nisy ilay tranga. Ny namoaka ny vaovao avy amin'ny facebook koa moa tsy azo tamin'ny fotoana ilana azy. Nipariaka tamin'ny facebook fa roa vavy nitondra basy no nahavanon-doza nangalatra nampiasa herisetra teny Behoririka. Sarin'ny caméra de surveillance teny ivelany moa no lazain'ny mpampita vaovao fa nahitana azy ireo.